YouTube Music ayaa gaartay 50 milyan oo isticmaale | Wararka IPhone
Ignacio Sala | 07/09/2021 10:00 | Apple Music, Tartanka
Muddo dhowr sano ah, Apple ma cusboonaysiiso tirada 60 milyan oo macaamiil ah kaas oo lahaa madal muusig oo qulqulaya bishii Luulyo 2019. Sababaha lama yaqaan laakiin waxaa laga yaabaa inay la xiriirto isla sababaha keenay in shirkaddu aysan ku dhawaaqin tirooyinka iibka ee iPhone, iPad iyo Mac.
Halka Spotify sii waddo inay koraan rubuc kasta iyo wuxuu qorsheynayaa inuu gaaro 400 milyan oo isticmaale dhamaadka sanadka (oo ay ku jiraan macaamiisha iyo isticmaaleyaasha nooca xorta ah ee xayeysiisyada leh), waxay umuuqataa inaysan ahayn madal qulqulka muusigga oo kaliya ku sameeya xawaare wanaagsan. Google ayaa ku dhawaaqday tirada isticmaaleyaasha barnaamijkeeda muusigga ee qulqulka YouTube Music.
Sida laga soo xigtay Raadiyaha weyn ee YouTube Music iyo YouTube Premium, waxaa hadda adeegsada 50 milyan oo isticmaale. Jaantuskan isticmaalayaasha ku jira marxaladda imtixaanka ayaa lagu daray. Tan iyo markii Google ay beddeshay magaca madalkeeda muusigga qulqulka ah ee Google Play Music oo loo beddelay YouTube Music, madalku wuxuu arkay koboc aad u weyn.
Google waxay sheeganeysaa in madalkeeda qulqulka waa adeegga rukunka billaha ah ee ugu koraan maanta. Waxay kaloo sheegaysaa in sannadkii hore ay bixisay in ka badan 4.000 bilyan oo doolar warshadaha muusiga. Lyon Cohe, Agaasimaha Caalamiga ah ee Muusigga ee Google wuxuu leeyahay:
Waxaan ku haynaa alaabada cajiibka ah YouTube Music iyo YouTube Premium oo runtii siiya qiime gaar ah fanaaniinta iyo hal -abuurka iyo waayo -aragnimada ugu wanaagsan ee taageerayaasha muusikada iyo kuwa jecel fiidiyowga. Waxaan joognaa cawskeenna: ma jirto meel kale oo ay taageerayaashu si aan kala go 'lahayn u geli karaan buugga ugu weyn uguna kala duwan muusigga, farshaxan -yahannada iyo dhaqanka.
YouTube Music waxaa lagu qiimeeyaa 9,99 euro bishii waana oggolaadaa marin u hel xayeysiis la'aan dhammaan muusikada, fiidiyowyada muusikada iyo nuxur kale. 3 euro oo dheeri ah, 12,99 euro, waxaad ka heli doontaa YouTube Premium, kaas oo na siiya shuruudo la mid ah YouTube Music laakiin sidoo kale ka saara dhammaan xayeysiisyada YouTube.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » YouTube Music ayaa gaartay 50 milyan oo isticmaale
Gaadhi cusub oo ah Magsafe khaas ah oo ku socda afar nooc oo cusub oo iPhone ah
Aaladaha soo socda ee Apple ayaa laga yaabaa inay arkaan qiimo koror aad u weyn sababtoo ah yaraanta chip